Jose Mourinho " Guuldaradii Real Madrid waxay noo noqon doontaa cashar" - BBC News Somali
Jose Mourinho " Guuldaradii Real Madrid waxay noo noqon doontaa cashar"
Tababaraha kooxda Manchester United oo xalay Real Madrid ugu awoodda sheegatay ciyaartii koobka Super Cup-ka ayaa sheegay in natiijada ciyaartaasi ay u tahay cashar wanaagsan kooxdiisa oo isku diyaarinaysa bilowga cayaaraha horyaalka Ingiriiska ee Premier League-ga.
Jose Mourinho wuxuu sheegay in Real Madrid oo ah horyaalka Champions League-ga ay qaaday isla markaana kooxdiisu ay qaaday Europe League-ga farqiguna uu yahay taasi, waxaase uu sheegay in ciyaartu ay noqon lahayd 1-1 hadii waa sida Jose uu sheegaye aan Real loo deyn gool hore ee oo Offisde ahaa.
Jose Mourinho waligiis koox uu wataa kama badin Real Madrid oo uu tababare u soo noqday, shan mar oo uu ka horyimid afar ka mid guuldaro ayuu la kulmay hal marna barbardhac.
Man United kulanka xiga ee ay ciyaarayso waa Premier League-ga oo Axada 6-da maqrnimo waqtiga Bariga Afrika waxay garoonkeeda Old Traford ku qaabili doontaa kooxda West Ham ee ka dhisan Bariga London.
Real Marid isla maalinkaasi ayay garoonka Nou Camp waxay marti ugu tahay kooxda Barcelona ee sida wayn xifaaltanku uga dhaxeeyo, iyagoo ku hardami doona lugta hore ee koobka Spanish Super Cup .
Jose Mourinho oo markale la ganaaxay
Jose Mourinho oo martiqaaday Sir Alex Ferguson
Mourinho oo meel qarsoodi ah ku daawaday ciyaartii West Ham
Sanchez oo dhaawacyo uga maqnaan doona kulamada ugu horeeya ee Arsenal.
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay in dhaawac caloosha ah oo tababarka ka soo gaaray ciyaaryahan Alexis Sanchez oo falaagada ka ah in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda Emirates Stadium in uu sababi doono in ciyaaryahankaasi aanu soo safan doonin kulanka ugu horreeya ee kooxda Arsenal ku qaabilayso kooxda Leicester.
Mr Wenger ayaa sheegay in Sanchez uu dhaawac soo gaaray ka hor ciyaartii kooxda Chelsea ay kaga qaadeen koobka Community Shield-ka, wuxuu intaasi ku daray in xitaa ay dhici karto in ciyaaryahanka khadka dhexe weerarka ka ciyaara uu maqnaan karo kulanka adag ee Arsenal la leedahay kooxda Stoke ee dhacaya 19-ka bishan.
Dhinaca kale tababare Arsene Wenger oo ka hadlayey heshiis uu diidan yahay in Sanchez uu saxiixo ayaa sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in uu ciyaaryahankaasi aqbali doono saxiixa heshiis cusub ka hor inta aanu dhamaan waqtiga uu kula joogo kooxda ka dhisan Waqooyiga London.